Seoul: North Korea haizotaure nezve kuputswa kwe 'shabby' hotera dzeSouth Korea
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Seoul: North Korea haizotaure nezve kuputswa kwe 'shabby' hotera dzeSouth Korea
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • vanhu • chengetedzo • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mudzvanyiriri weNorth Korea Kim anoraira 'shabby' mahotera eSouth Korea akaparadzwa
South Korea neMuvhuro yakurudzira musangano wekushanda pamwe neNorth Korea, mazuva mashoma mushure mekunge maNorth akarayira kuti maSouth Korea vauye kuNorth. Diamond Mountain nzvimbo yekutandarira panguva yakabvumiranwa yekubvisa zvivakwa zvavo.
Asi Pyongyang aramba chikumbiro chaSeoul chehurukuro dzepamutemo dzekuzeya nezvekuputswa kwemahotera akaitwa kuSouth Korea uye zvimwe zvivakwa paDiamond Mountain resort iyo mudzvanyiriri weNorth Korea Kim Jong-un akazivisa 'shabby' uye anoda kuparadzwa.
Kim anonzi akarayira kuparadzwa kwemidziyo iyi, sezviri pachena nekuti Seoul haazoregi zvirango zvakatungamirwa neUS uye kutangazve kushanya kweSouth Korea panzvimbo iyi.
Bazi reUnited muSeoul rakati North Korea yakatumira tsamba kuSouth nhasi ichiti misangano-ne-zviso hazvizoite.
Russia neNamibia vanoenda pasina vhiza